Nzukọ - Ọnwụ nke Mmepụta America | Martech Zone
Nzukọ - Ọnwụ nke Nrụpụta America
Tuzdee, Machị 23, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Gịnị mere ọmụmụ ihe ji ara ara? Nso ke akpanam man mbono esop enem? Agbalịrị m ịza ajụjụ ndị ahụ niile na ihe ngosi a na-atọ ọchị (ma na-eme ihe n'eziokwu) na nzukọ.
Nke a bụ mmelite elele nke ngosi m mere n'onwe m. Ihe ngosi a na nzukọ abiala nwa oge, edeela m banyere nzukọ na arụpụtaghị ihe n'oge gara aga. Agara m ọtụtụ nzukọ, ma imirikiti n'ime ha abụrụla oge dị egwu.
Mgbe m bidoro azụmahịa nke m, achọpụtara m na m na-ahapụ oge buru ibu ka nzukọ m wee mịfu oge m. Enwere m ọtụtụ ọzụzụ ugbu a. Ọ bụrụ na m nwere ọrụ ma ọ bụ ọrụ m ga-arụ, amalitere m ịkagbu na ịhazi usoro nzukọ m. Y’oburu n’acho ulo oru ndi ozo, oge gi gha agha. Nzukọ nwere ike iri oge ahụ ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Na onodu aku na uba ebe oru agha aghaghi ibuwanye na ihe ndi ozo na-adighi, i nwere ike ichoro nlezianya anya na nzuko ka ichota ohere iji meziwanye ha.
Anọ m na-agụ akwụkwọ n'oge na-adịbeghị anya na akwụkwọ ndị a na-akpali m n'ezie banyere azụmahịa m na arụpụta onwe m - Seth Godin's Linchpin: You Dị Oké Mkpa?, Jason Fried & David Heinemeier Hansson's Megharia na Tim Ferriss ' Ọrụ 4-Hour Workweek. Akwụkwọ ọ bụla na-atụle Nzukọ na ha.
Tags: ọnwụ nke nzukọnzukọarụpụtaghị
Nnukwu ihe ngosi Douglas, daalụ maka ịkekọrịta!
Agarala m akwụkwọ ọhụrụ Godin na nso nso a ma achọtala mkparịta ụka na-atọ ụtọ banyere Linchpin na Startups.com. Nwere ike ịlele ya ebe a http://bit.ly/b219d6
Nzukọ iji hazie nzukọ. Ọnwụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ngbanwe nke ikike na ikike onye ọ bụla na ịzụta ihe na nkwenye na nke kacha nta. Ekwenyere m n'ọtụtụ Doug ikwu ebe a.
Ezigbo esemokwu = esemokwu dị mma. Ọ na-amasị m ịga nzukọ na-emepụta ihe na-enweghị mkpokọta ịzụta. Kpọọ ya "ihe akaebe nke echiche" na ị na-enwekarị obi ike na ị ga-azụta ụlọ. Gbalịa ya: ọ na-arụpụta ihe, ọ na-arụ ọrụ, ọ na-ama ndị mmadụ aka iche echiche dị iche.